Qdoba ले एप्पल भुक्तानी लिन्छ? - उत्तर दिए!
घर / स्याउ पे, सम्पर्कविहीन, भुक्तानी / Qdoba ले एप्पल भुक्तानी लिन्छ?
Qdoba ले एप्पल भुक्तानी लिन्छ?
1 Qdoba को परिचय
2 एप्पल पे को लागी परिचय
3 के क्डोबाले एप्पल भुक्तानी स्वीकार गर्दछ?
4 तपाइँ क्डोबामा एप्पल पे कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
4.1 कसरी तपाइँको आईफोन वा एप्पल वाचमा एप्पल भुक्तानी सेटअप गर्ने
4.2 तपाइँको आईफोनको साथ एप्पल भुक्तानीको प्रयोग कसरी गर्ने
4.3 तपाइँको एप्पल वाचको साथ क्डोबामा एप्पल भुक्तानी कसरी प्रयोग गर्ने
4.4 Qdoba को मोबाइल अनुप्रयोगको साथ कसरी एप्पल भुक्तानी प्रयोग गर्ने
Qdoba को परिचय
क्दोबा मेक्सिकन ईट्स संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाको शीर्ष मेक्सिकन शैलीको फास्ट-क्याजुअल रेस्टुरेन्ट चेन मध्ये एक हो। १ 1995 700 in मा एन्थोनी मिलर र रोबर्ट हौसरले कोलोराडोमा स्थापना गरेपछि उनीहरूको वृद्धि भएको छ। आज तिनीहरूसँग २ देशहरू र states2राज्यहरूमा 47०० भन्दा बढी स्थानहरू छन्, स्वादिष्ट बुरिटो, टाकोस, क्वेक्डिला, चिली कोन क्वेको, र मेक्सिकन गम्बो सेवा गर्दै। उनीहरूले ताजा, स्वादिलो ​​खाना तयार गर्दछन् जुन तपाईंलाई ठीक मन पराइएको हो। तपाइँको प्रोटीन र तपाइँको सबै toppings छनौट; छनौट तपाईंको हो !.
कडोबा नामको अर्थ के हो भनेर कहिल्यै सोच्न सक्नुहुन्छ? कडोबाको यस प्रश्नको बारेमा एउटा विज्ञापन अभियान थियो र यसले पत्ता लगायो कि क्डोबाले विभिन्न व्यक्तिको लागि धेरै चीजहरू बुझाउँछन् तर ती सबै बिचमा मिलाउने विषयवस्तु भनेको कदोबाले ल्याउने स्वाद हो।
एप्पल पे को लागी परिचय
एप्पल भुक्तानी एक सजीलो गर्न को लागी, सम्पर्क रहित भुक्तान विधि हो जुन तपाईंको एप्पल उपकरणहरू जस्तै तपाईंको एप्पल वाच र आईफोनसँग काम गर्दछ। तपाईं यसलाई व्यक्तिमा स्टोरहरूमा, अनुप्रयोगहरू मार्फत, वा वेबमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाइँको भुक्तानी गर्न को लागी एक सुरक्षित, सुरक्षित तरीका हो। परिवर्तनका लागि पर्खने दिनहरू वा क्रेडिट कार्ड रिडर प्रयोग गर्ने दिनहरू भयो जुन हजारौं अन्य फोहोर कार्डहरू पहिल्यै भइसकेका छन्। एप्पल भुक्तान: आधुनिक संसारको लागि आधुनिक भुक्तान विधि।
तर के क्डोबासँग एप्पल पे छ?
के क्डोबाले एप्पल भुक्तानी स्वीकार गर्दछ?
हो, Qdoba ले एप्पल भुक्तानीलाई उनीहरूको रेस्टुरेन्टहरूमा र तिनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोगमार्फत एक सम्पर्क रहित भुक्तान विधिको रूपमा लिन्छ! कडोबाले जुलाई २०२० मा अमेरिकी र क्यानेडाली रेस्टुरेन्टहरूमा एप्पल पेलाई रोल आउट गर्न शुरू गर्यो र त्योभन्दा पहिले उनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत।
यहाँ जुलाई २०२० मा क्डोबा आफैंले एउटा बयान आयो कि उनीहरूले गुगल पे र सामसु Pay पे संग उनीहरूको रेष्टुरेन्टहरूमा एप्पल पे समर्थन गर्दछन्।
तपाइँ क्डोबामा एप्पल पे कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ?
एप्पल पे प्रयोग गरेर क्डोबामा अर्डर गर्न तयार हुनुहुन्छ? पहिले, के तपाईंले आफ्नो आईफोन वा एप्पल वाचमा एप्पल पे सेट अप गर्नुभयो? यदि तपाईंले पहिले नै यो सेट अप गर्नुभयो भने, तपाईं अर्को सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ; अन्यथा, मा पढ्नुहोस्।
कसरी तपाइँको आईफोन वा एप्पल वाचमा एप्पल भुक्तानी सेटअप गर्ने
तपाईंको आईफोनमा एप्पल भुक्तानी सेट अप गर्न 'सेटिंग्स' सेक्सनमा जानुहोस् र 'वालेट र एप्पल पे' चयन गर्नुहोस्। अर्को, 'कार्ड थप्नुहोस्' चयन गर्नुहोस्। 'जारी' थिच्नुहोस् र तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुभएको भुक्तानी प्रकार चयन गर्नुहोस्। तपाईंको क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्ड विवरणहरू थप गर्नुहोस् कि त तपाईंको आईफोनलाई तपाईंको क्रेडिट कार्डमा होल्ड गर्नुहोस् जबसम्म यसले तपाईंको क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू सफलतापूर्वक पढ्दैन, वा तपाईं क्रेडिट कार्ड विवरण मैन्युअल रूपमा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रोजाई। अब तपाईंले एप्पलका सर्तहरू र सर्तहरूसँग सहमत हुन आवश्यक छ र कुनै पनि आवश्यक क्रेडिट कार्ड प्रमाणीकरण चरणहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। यस पछि, तपाईंको कार्ड तपाईंको एप्पल वालेटमा हुनेछ र एप्पल पे प्रयोग गरेर प्रयोग गर्नको लागि तयार हुनेछ।
तपाईंको एप्पल वाचमा एप्पल भुक्तानी सेट अप गर्न, तपाईंले आफ्नो लिंक गरिएको आईफोन प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तपाईको लि linked्क गरिएको आईफोन प्रयोग गरी तपाईको 'एप्पल वाच' अनुप्रयोग खोल्नुहोस्। अर्को, 'वालेट र एप्पल भुक्तानी' ट्याप गर्नुहोस्। अब, 'कार्ड थप्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस् र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् तपाईंको एप्पल वाचको एप्पल भुक्तानीमा तपाईंको मनपर्दो क्रेडिट कार्ड थप्न।
नोट: केही खुद्रा विक्रेताहरूको कम्तिमा सीमा छ कि तपाईं एप्पल पे जस्ता सम्पर्कविहीन भुक्तानी विधि प्रयोग गरेर कसरी खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतया, यस सीमा भन्दा बढि भुक्तानी हुनेछ, तर क्लर्कले या त तपाइँको आईडी जाँच गर्नेछ वा हस्ताक्षरको लागि सोध्छ। बिरलै, तपाईंलाई एक शारीरिक क्रेडिट कार्ड वा नगद संग भुक्तानी गर्न सोधिनेछ।
तपाइँको आईफोनको साथ एप्पल भुक्तानीको प्रयोग कसरी गर्ने
यदि तपाईं Qdoba मा Apple Pay को साथ भुक्तानी गर्न आईफोन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
पहिले तपाईको आईफोनको दायाँ बटनमा डबल क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को, तपाईंको आईफोनको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् यदि तपाईं अनुहार आईडी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईं टच आईडी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने घरको सेन्सरमा आफ्नो औंला राख्नुहोला, वा तपाईंको पासकोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अन्तमा तपाईको आईफोनलाई सम्पर्क रहित भुक्तान रिडरमा समात्नुहोस्, जुन तपाईको क्रेडिट कार्ड सामान्यतया राख्नुहुन्छ। तपाईंले पिंग नसुन्जेल यसलाई समातिरहनुहोस्, भुक्तानी रिडरमा हरियो चेकमार्क हेर्नुहोस्, वा एक चेकमार्क प्लस तपाईंको आईफोनको स्क्रिनमा शब्द 'भयो' हेर्नुहोस्। त्यो हो!
तपाइँको एप्पल वाचको साथ क्डोबामा एप्पल भुक्तानी कसरी प्रयोग गर्ने
पहिले, डायलको दायाँपट्टि साइड बटन डबल ट्याप गर्नुहोस्।
अर्को, यदि संकेत गरीयो भने तपाईको पासकोड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अन्तमा, भुक्तानी पूर्ण नभएसम्म सम्पर्कविहीन भुक्तान रिडरमा तपाईंको एप्पल वाच होल्ड गर्नुहोस्। त्यो हो!
Qdoba को मोबाइल अनुप्रयोगको साथ कसरी एप्पल भुक्तानी प्रयोग गर्ने
Qdoba अनुप्रयोग खोल्नुहोस्, साइन इन गर्नुहोस् वा नयाँ खाता सिर्जना गर्नुहोस्, र तपाईंको स्टोर लोकाटोइन छनौट गर्नुहोस्। सुझाव: यदि तपाइँ तपाइँको Qdoba पुरस्कार कार्ड नम्बर प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाइँ कमाउन र Qdoba प्रस्तावहरू तपाइँको अर्डरको साथ रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको खाना छान्नुहोस् र तपाईंको कार्टमा थप्नुहोस्।
तपाईंको शपिंग कार्टमा जानुहोस्, तपाईंको वस्तुहरू समीक्षा गर्नुहोस्, र भुक्तानी जारी राख्नुहोस्।
तपाईंको पिकअप वा समय छनौट गर्नुहोस्, तपाईंको जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्, र तपाईंको भुक्तान विधिको रूपमा एप्पल पे छनौट गर्नुहोस्।
तपाईंको खानाको मजा लिनुहोस्!
अनुप्रयोग आधारित भुक्तानस्याउ भुक्तानस्याउ भुक्तानी रेस्टुरेन्टसम्पर्क रहित भुक्तानचाँडो खानाक्युडोबारेस्टुरेन्ट स्याउ पेसम्पर्कविहीनभुक्तानी
स्लोभाकियामा टिपिंग 1844
के तपाइँ टिप एएए गर्नुहुन्छ? 1692
टिपिंग टूर गाईड्स श्रीलंका 1683
रोममा टिपिंग टूर गाईडहरू 1666